Aung's Investment: SOHU chart
ညီလေးတစ်ယောက်က SOHUရဲ့ Technicalလေးလုပ်ပါဦးဆိုလို့ အောက်မှာ ပြထားပါတယ်။
Dailyမှာ ကြည့်လိုက်ရင်တော့ အခုတလော Selling Pressureများနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Februaryက breakoutလုပ်ခံရတဲ့ Resistance line $78ဟာ ပြန်ပြီးTestခံရဖို့ Chanceများပါတယ်။ သတ္တိရှိရင်တော့ $78မှာ Tight-stopထားပြီး ဝယ်သင့်ပါတယ်။ ဆိုးဆိုးရွားရွား သတင်းမရှိဘဲ $78အောက်ရောက်ဖို့တော့ Chanceနည်းပါတယ်။ သေချာချင်ရင်တော့ 78ကနေ Bounceပြန်ဖြစ်တဲ့အထိစောင့်သင့်ပါတယ်။
Weeklyကို ကြည့်လိုက်ရင်တော့ သတိထားစရာတွေပိုရှိပါတယ်။ 2010 Julyကစခဲ့တဲ့ Long-term uptrendဟာ နောက်ဆုံးအပတ်မှာ Brokenဖြစ်နေတာကို ကျွန်တော်သိပ်မကြိုက်ပါဘူး။ Past two weeks (down weeks)တွေမှာ Volumeတွေကောင်းတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒါမျိုးတွေ့ရင် ပိုသတိထားရပါမယ်။ 78ကို Testလုပ်မလား Definitely စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
Posted by Aung Myo Htet at 5/15/2011 07:14:00 PM
Labels: SOHU, technical analysis
whiteghostlay May 19, 2011 6:53 AM
အစ်ကိုရေ ကျေးဇူးပါ မေလ ကုန်ခါနီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ လည်း စိမ်းစိမ်းလေးတွေ မြင်ခါနီးပြီလို့ ထင်ပါတယ် :D
Aung Myo Htet May 19, 2011 8:26 AM
မနေ့က SOHU ၇၉အောက်ကိုဆင်းသွားပြီး ပြန်ဆောင့်တက်သွားတယ် ညီလေး။ မဝင်လိုက်ဘူးလား။ S&P500 reclaims 1340 today. Rally is intact so far.
whiteghostlay May 19, 2011 11:34 PM
ကျွန်တော်ဝင်တာစောသွားတယ်အစ်ကို ဒါပေမယ့် နည်းနည်းပါ အဓိက RENN မှာ ပိတ်မိနေတယ် ပြန်တက်လာပါစေလို့ ပဲ မျှော်လင့် ရမှာပဲ
whiteghostlay May 20, 2011 2:20 AM
ဒီနေ့ Linkedin IPO ကတော့ အားရစရာပဲအစ်ကိုရေ နစ်ဆလောက်ကိုဖြစ်သွားပြီ
Aung Myo Htet May 20, 2011 7:30 AM
RENNက too hotဖြစ်နေလို့ ခဏရှောင်နေဦးလို့ အစ်ကိုပြောသားပဲ။ If it's too hot, don't join that crowd because correction will be severe.